Doorashada Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle oo maanta ka dhaceysa Jowhar – STAR FM SOMALIA
Doorashada Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle oo maanta ka dhaceysa Jowhar
Doorashada xubnaha Aqalka sare ee Maamulka Hirshabeelle ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada Jowhar, kaddib markii maalinimadii shalay uu dib u dhac ku yimid.
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka hor-yimid wax ka bedel uu ku sameeyay Madaxweynaha Hirshabeelle liiskii Musharaxiinta Aqalka sare, waxaana wada tashiyo iyo wada hadalo lala yeeshay Xildhibaanada lagu guuleystay inay ogolaadaan qabsoomida doorashada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Madaxweynaha Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble uu liiska ka saaray xubno ka mid ah Musharaxiinta Aqalka sare oo la sheegay inay ku jirtay Xaaskiisa, taasoo aheyd waxyaabaha ay dooda ka keeneen Xildhibaanada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Bare ayaa sheegay in maanta la dooran doono Xubnaha Aqalka sare, iyadoo gelinka hore ee maanta la dhageysanayo khudbadaha Musharaxiinta.
“Maanta Afar saac ayay soo xaadirayaan Xildhibaanada, 5-saac ayaa la dhageysanayaa khudbadaha Musharaxiinta, 10-saac ama bacdal Casir waxaa bilaabaneysa doorashada”ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inay jiraan Xildhibaano ka biya diideen xubnaha qaar ee ku jira Liiska Musharaxiinta Aqalka sare, kuwaasoo horay ugu hanjabay inay mooshin ka keenayaan.
Xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa markii horeysay diidmo qayaxan kala hor-yimid wareegtadii Madaxweynaha Hirshabeelle uu jimcihii la soo dhaafay ku magacaabay Liiska Musharaxiinta Aqalka sare, taasoo dad badan ku tilmaameen in Baarlamaanka Hirshabeelle uu yahay baarlamaankii u horeeyay ee ka tirsan kuwa dowlad goboleedyada ee diida wareegto Madaxweyne.
Shacabkii ku haray Magaalada Gaalkacyo oo ka barakacaaya guryahooda